डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदै नेपाल आयल निगम | News Polar
डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदै नेपाल आयल निगम
सोमनाथ लामिछाने / रासस पुष २६, २०७७, आइतबार
इन्डियन आयलको रक्सौल, बरौनी डिपोभन्दा थानकोट डिपो राम्रो भइसकेको छः ई. यादव
सोमनाथ लामिछाने / रासस
काठमाडौंः नेपाली समाजमा ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ भन्ने एउटा उखान छ । नेपाल आयल निगमले यो उखानलाई आत्मसात गर्दै वर्षौदेखि झेल्दै आएको आन्तरिक तथा प्रशासनिक समस्यालाई समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरेको छ । यसै अन्तर्गत लामो समयदेखि विभिन्न कारणले रोकिएका योजनाहरुलाई एकै साथ अघि बढाएर कीर्तिमानी राख्ने तयारीमा जुटेको छ ।
सुधारका कामको नमूनाको रुपमा थानकोट डिपोलाई लिन सकिन्छ । केही समय पहिलासम्म अस्तव्यस्त रुपमा रहेको ३ नं. प्रदेशको प्रादेशिक कार्यालयसमेत रहेको सो कार्यालय अहिले नमुना कार्यालयमा दर्ज भएको छ । कार्यालय परिसर चिटिक्क पारिएको छ । अस्तव्यस्त रुपमा बाटोभरी पार्क गरिएका ट्याङकरहरु अहिले ढलान गरिएको आफ्नै पार्किङमा लाइनमा राखेको देख्न सकिन्छ ।
दश वर्ष पहिले थानकोट डिपोबाट दैनिक करिब १० गाडी पेट्रोल, १५ गाडी डिजेल र २–४ गाडी मट्टितेल खपत हुन्थ्यो । तर पछिल्ला दश वर्षमा यी इन्धनको खपत ह्वात्तै बढेको छ । अहिले १०० गाडीको हाराहारीमा दैनिक कारोबार हुने गरेको छ । अहिले दैनिक १५०० देखि २००० किलोलिटर इन्धन यहाँबाट बाहिरिन्छ । यसका लागि निगमको क्षमता बढाउनुको विकल्प थिएन । नियमित मर्मत सम्भार हुन नसक्दा डिपोको अवस्था नाजूक थियो । सेवाग्राहीको संख्या पनि व्यापक बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ निकै संवेदनशील हुने भएकाले पनि उचित सुरक्षा र सरसफाई जरुरी हुन्छ, र त्यसमा निकै कमी पाइएको थियो ।
डिलर, पम्पहरुलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर दबाब दिने निगम स्वयंको डिपो भने कवाडजस्तो अवस्थामा राख्नु हुन्न भन्ने सोचाईका साथ सुधार र मर्मत सम्भारका कामलाई अघि बढाइएको निगमले जनाएको छ ।
थानकोट डिपोका कार्यालय प्रमुख ई. प्रदीप कुमार यादव भन्नुहुन्छ – “सरकारी कार्यालय भन्नेबित्तिकै हाम्रो मानसपटलमा टुटे फुटेका झ्याल, ढोका र फोहोर शौचालयको तस्वीर आउँछ । तर अहिले यहाँ आइपुग्ने सेवाग्राही निकै प्रसन्न छन् । काममा छिटोछरितो भएको छ, सेवाग्राहीले तुरुन्त सेवा पाउने वातावरण बनेको छ । पहिले एक घण्टा लाग्ने काम अहिले १०–१५ मिनेटमै हुने गरेको छ ।”
इन्जिनियर प्रदीप कुमार यादव (तस्वीरः न्यूजपाेलार)
भौतिक सुधारका लागि थानकोट डिपोमा यस वर्ष झण्डै पाँच करोड खर्चिएको निगमले सुधारका कार्यलाई व्यापकता दिएको छ । कार्यालय प्राङ्गण सफा सुग्घर हुनुका साथै क्यान्टिन, सभाहल, प्रतीक्षालय, शौचालय समेतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । स्थानीयवासीले सधैं गुनासो गर्दै आएको पार्किङको विषय पनि अहिले सुल्झिएको छ । थानकोटको राजमार्गदेखि निगमको डिपोसम्मको करिब ३०० मिटर भित्री बाटोमा १०० देखि १५० वटा बढी ट्याँकरहरु दिनभर पार्क गरिन्थ्यो । बाटोमा एम्बुलेन्स, स्कुलका बस हिँड्ने अवस्था पनि हुँदैनथ्यो । स्थानीयवासीका लागि पनि टाउको दुखाई हुँदै आएको यो समस्या निगमले अहिले सुल्झाएको छ । अहिले निगमकै झण्डै ६० रोपनी जग्गाभित्र पूर्वतर्फ झण्डै ३०० वटा ट्याँकर अटाउने व्यवस्थित पार्किङ स्थल बनाइएको छ ।
डिपोभित्र तेल जाँच गराउन पुगेका एक ट्याँकर चालक मनोज अधिकारी भन्नुहुन्छ, “दश महिना पहिले यहाँ सेवा लिन घण्टौं बस्नुपथ्र्यो । तेल खन्याउन र भर्न आफ्नो पालो कहिले आउला भनेर कुर्नु पथ्र्यो । अहिले त्यस्तो छैन । आफ्नो कागज पेश गरेर टोकन लियो, पालैपालो सेवा लियो । सिस्टम बसेको छ । डिपोले दिने सेवामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी सुधार आएको छ ।”
निगमले कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन गरेको अर्को प्रयास हो लोड–अनलोड सेड निर्माण । करिब एक करोडको लागतमा निगमले यसैवर्ष तीन वटा सुविधासम्पन्न र अग्नि सुरक्षित सेड निर्माण गरेको छ । निगमसँग यसअघि सात वटा सेड थिए, अर्थात् एक पटकमा सात वटा ट्याँकरमा तेल भर्न सकिन्थ्यो । तर अब १० वटा ट्याँकरमा एकसाथ तेल पर्न सकिन्छ । सुरक्षात्मक उपाय मजबूत बनाइएका यी प्रत्येक सेडबाट १५–२० मिनेटभित्रै एक ट्याँकर तेल भर्न सकिन्छ ।
निगमकाे थानकाेट डिपाे (तस्वीरः न्यूजपाेलार)
यादव भन्नुहुन्छ, “यो संवेदनशील स्थान भएको हुनाले हामी यसमा सचेत छौ । यहाँ हामीले सुरक्षाका सबै उपायहरु अवलम्बन गरेका छौ । दमकल लगायतका सबै कुरा तयारी अवस्थामा हुन्छन् । यहाँ आगलागी भएपनि दुई मिनेट भित्रै निभाउन सक्ने क्षमता निगमसँग छ ।”
सेवाग्राहीको सजिलोका लागि अहिले टोकन प्रणाली राखिएको छ । सबै काम कम्प्युटर प्रणालीमा हुने हुनाले कुनै समस्या हुँदैन र काममा छिटो हुन्छ । डिलर र ट्रान्सपोर्टरलाई कुनै समस्या हुँदैन । घण्टौ पखर्नुपर्ने काम केही समयमा नै हुन्छ । त्यसैले चाह्यो भने सिस्टममा परिवर्तन गर्न सकिने यादव बताउनु हुन्छ, तर त्यसको लागि इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्दछ ।
निगमका डिपोहरु अटोमेसन हुँदैछन्
इन्धन वितरणमा सहजता ल्याउन र विश्वासिलो बनाउन डिपोहरु स्वचालित (अटोमेसन)मा जानुको विकल्प छैन । अटोमेसन भनेको डिपोका ठूला ट्याँकमा तेल भर्ने, लोड–अनलोड कम्प्युटरकृत गर्ने तथा सम्पूर्ण कारोबार विद्युतीय प्रणालीमा गर्ने हो । यसो गर्दा निगमको सम्पूर्ण कार्य प्रक्रिया पारदर्शी गर्न सघाउन पुग्छ । इन्जिनियर यादव भन्नुहुन्छ, “अहिले हामीसँग म्यानुएल विधि छ, मान्छेले सबै नाँपजाँच गर्नुपर्छ । अटोमेसन भएपछि कम्प्युटरले सबै नियन्त्रण गर्दछ, मान्छेको भूमिका कम हुन्छ । जस्तै अहिले १२ हजार लिटर तेल दिनु परे मान्छेले नापेर दिन्छन् तर अटोमेसनमा गएपछि कम्प्युटरले नापेर दिन्छ, १२ हजार पुगेपछि रोकिन्छ, र स्वचालित रुपमा बिल बन्छ ।”
निगमको निकै महत्वाकाँक्षी यो योजना निकै अघि बढिसकेको ई. यादवको भनाई छ । निगमले डिपोहरुलाई अटोमेसनमा लैजान कस्ता किसिमका उपकरण चाहिन्छ, कहाँकहाँ परिवर्तन गर्नुपर्छ, के कति खर्च लाग्छ, त्यसको लागि परामर्शदाता छनौटको काम अगाडि बढाइसकेको छ । हाल परामर्शदाता छनौटका लागि मूल्याँकन प्रक्रियामा रहेको निगमले जनाएको छ । ई. यादवको भनाईमा परामर्शदाता छनौट भइसकेपछि एक वर्षभित्रै मोडालिटी तयार हुन्छ, र कुनै अबरोध नआए २ वर्षभित्रै निगमका डिपोहरु पूरै अटोमेसनमा गइसक्छन् ।
अटोमेसनमा जाँदा निगमको छविमा व्यापक सुधार हुनेछ । तेल वितरणमा विगतमा उठाइने कैयौं आशंका र प्रश्नलाई यसले सम्बोधन गर्नेछ । निगमका अनुसार हालको म्यानुएल विधिबाट काम गर्दा निगमका कर्मचारीमाथि तेल कम दियो, अथवा अन्य गुनासाहरु हुने गर्दथे, अटोमेसनले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भने सेवाग्राहीमा पनि विश्वासको वातावरण बन्ने निगमको विश्वास छ । डिलरले पनि राम्रो सेवा पाउँछन् भने कर्मचारी पनि सुरक्षित हुन्छन्, ई. यादव भन्नुहुन्छ ।
भण्डारणका लागि डिजेलको ८ हजार ४०० किलोलिटर, पेट्रोलको ६ हजार २०० किलोलिटर र मटितेलको ७ सय ६० किलोलिटरका ट्यांक छन् । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेकै अवस्थामा डिजेल १० दिन र पेट्रोल एक हप्ताका लागि पुग्छ । तर हामी पेट्रोलका लागि करिब ५५ देखि ६० करोडको लागतमा चार–चार हजार किलोलिटर क्षमताका दुई वटा भण्डारण ट्याँक बनाउने क्रममा छौं, र यसको टेन्डर एक महिनाभित्रै गर्ने तयारी छ । यो ट्याँक बनेपछि थानकोट डिपोले २० दिनका लागि पेट्रोल आपूर्ति गर्न सक्नेछ ।”
डिजेल आपूर्तिमा भने निगमलाई कुनै समस्या नरहेको ई. यादवको भनाई छ । उहाँका अनुसार अमलेखगन्ज डिपोसम्म भारतबाट पाइपमार्फत निर्वाध रुपमा डिजेल आपूर्ति भइरहेको हुन्छ । पेट्रोल भने निगमले भारतको रक्सौल र बरौनी डिपोबाटै ल्याइरहेको छ । खासगरी अमलेखगन्ज डिपोमा पेट्रोल भण्डारणका लागि पर्याप्त ट्याँक नभएकाले पाइपबाट पेट्रोल ल्याउने कार्य शुरु भइसकेको छैन । यादवका अनुसार चाँडै निगमले अमलेखगन्जमा डिपो बनाउँदैछ, र त्यो बनेपछि सीमामा कुनै कठिनाई भए पनि पेट्रोल र डिजेल दुबैको आपूर्ति नेपालभित्र नियमित र सुलभ हुनेछ ।
थानकोट डिपोले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला सहित कूल १० जिल्लाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गरिरहेको छ । निगमका अनुसार थानकोट डिपोका लागि भारतबाट ४२५ वटा ट्याँकरले तेल ओसार्न अनुमति पाएका छन् । यस डिपोबाट तेल लिएर बिक्री गर्नेहरु काठमाडौं उपत्यकामा १२० तथा उपत्यका बाहिरका ६० वटा बिक्रेता छन् ।
प्रकाशित : पुष २६, २०७७, १९:२७:११